‘म आएँ !’ | कथा | आन्विका गिरी | दशैं साहित्य विशेष
यो कथा गएको वर्षको हिमाल खबरपत्रिकाको 'दशैं साहित्य विशेष' अंकमा छापिएको ‘धत्’ शीर्षकको कथाको अन्त्य हो । पूर्वकथामा बसमा म पात्र र उसको भेट हुन्छ । ऊ धेरै बोल्छे, जे पनि सोधिदिन्छे । म पात्र महिला बारेका अनेकौं पूर्वधारणाले भरिएको हुन्छ । उसलाई त्यो महिला त्यसरी आफैं अघि सरेर बोलेको मन नपर्दा नपर्दै पनि दुवैबीच आफ्नो कथा भन्ने र सुन्ने काम हुन्छ । कथा त्यसरी नै सकिन्छ, जसरी यात्रुहरू आ–आफ्नो गन्तव्यमा ओर्लिएपछि यात्रा सकिन्छ । तर, यात्रा सकिएपनि यात्राका क्रममा जोडिएका सम्बन्ध नसकिने रहेछ । ‘म आए !’ त्यही सम्बन्धको कथा हो ।
मैले सोचेको थिएँ, उसले तुरुन्तै हुन्छ भन्छे ।
‘म यहाँ आइराख्छु । मीठो चिया पिउने टन्नै ठाउँ था’छ ।’ ऊ मतिर नहेरी बोली । ऊ कपाल बाँध्ने कुरा नपाएर यताउता हेर्दै थिई । मसँग बोल्दा उसको देब्रेहात कपालमा थियो र दाहिने हातले ब्याग खोतल्दै थिई ।
म एकछिन के भनूँ भनूँ भएँ । तुरुन्तै हिंडिहाल्न सकिनँ । उसले रबर खोजेको हेरिरहें । गाडीमा छुट्यो होला भनेर उसले अघि बस रोकेतिर हेरी तर बस अघिको ठाउँमा थिएन । शायद पार्किङ गर्न कतै लगिसकेका थिए । आखिरमा उसले तल भुइँमा प्लाष्टिकको डोरीको टुक्रा देखी । थपक्क टिपी र त्यसैले कपाल बाँधेर बल्ल मेरो अनुहारमा हेरी ।
‘अहिले त निकै थाकेको छु । होटल गएर एक निद्रा सुत्छु । बरु साँझमा तपाईंको के कार्यक्रम छ ?’ उसले सानो झोला काँधमा भिरी र लुगा राख्ने झोला दाहिने हातले उठाई ।
एक त उसले मेरो चिया खाने प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी उसमाथि साँझमा भेट्ने कुरा गरी । मलाई भाउन्न भएर आयो । जिन्दगीमा पहिलो पल्ट मैले कुनै महिलालाई चिया पिउन प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यसका लागि मलाई कत्रो बल परेको थियो, उसले के जानोस् । त्यतिखेर मेरो मुटुको गति कुनै डाक्टरले नाप्थे भने सोझै अस्पताल भर्ना गरिदिन्थे होला । अर्को साँझमा भेट्ने कुराले त मेरो खुट्टै कामे ! कस्ती आइमाई मान्छे होली, भर्खरै चिनजानको मान्छेलाई लाजै नमानी साँझमा भेट्ने कुरो गर्छे ! मैले आजसम्म कोही महिलालाई साँझमा त के दिउँसै पनि एक्लै भेटेको थिइनँ ।
‘साँझमा त मैले आइमाई मान्छे भेट्ने गरेको छैन ।’ मेरो मुखबाट मनमै भएको कुरा निस्कियो । थप उसले के भन्ली भनेर मैले तनाव लिनु परेन किनकि अफिसमा पहिल्यैदेखिका चिनजान अनिलजी आफैं लिन आएका रहेछन् । उनी हात हल्लाउँदै मतिर आए । उनले मलाई बचाए ।
होटलमा गएर फ्रेस भएपछि एक झप्को सुतें । मलाई आफैंसँग लाज लागिरहेको थियो । मलाई किन जान्ने भएर चिया खाउँ भन्नु परेको होला ! ऊ आफ्नो बाटो लागिसकेकै थिई, म पनि खुरुखुरु आफ्नो बाटो लागेको भए के हुन्थ्यो । आखिरमा मेरो ऊसँग फेरि कहाँ भेट हुन्थ्यो र ! फेरि यही दिनदिनै भेट हुने मान्छे होइन, एकचोटि भेट भो सकियो भनेर आफूलाई सम्झाएँ ।
आफूलाई सम्झाउनमा म खग्गु भइसकेको छु । मनु गइसकेपछि मलाई सम्झाउने मै त हुँ । त्यसो त मनु हुँदाहुँदै पनि उसले सम्झाउँदा मैले कहाँ सम्झिएको थिएँ र ! काकाले जग्गाको साँध मिच्दा मनुले मुद्दा हाल्न सम्झाएकी हो, मैले कहाँ माने ! मुद्दा पनि हालिन तर काकासँग सारै खुन्खुनिएँ । त्यतिखेर पनि उसले भयो अब मनमा धेरै तीतो नराख्नु भन्दा मैले मानें ? मानिनँ । त्यसैले म वर्षौंदेखि आफैंले आफैंलाई सम्झाउन बानी परेको छु ।
जेठका लामा दिनहरूमा ६ बजेसम्म कोठामा घाम आइरहेको थियो । कुनै दाताको संयोजनमा कार्यक्रम भएकाले सौराहाको राम्रै होटलमा व्यवस्था थियो । चारैतिरबाट उज्यालो आउने कोठा देख्ता पनि काठमाडौंमा वर्षौं बसेको मान्छेलाई अत्यास लाग्ने रहेछ । सुतेर उठेपछि नुहाइधुवाइ गरें । एसीले गर्दा भित्र त शीतल नै भएको थियो, बाहिर भने घामको चहकले कोठाको बाल्कोनीमा समेत निस्कने आँट आएको थिएन ।
टीभी खोल्दा मभन्दा अघिल्लो मान्छेले एमटीभी हेरेर छोडेको रहेछ । अंग्रेजी गीत बज्दै थियो । कुन गीत, कसले गाएको गीत मैले केही टिप्न सकिनँ । कान्छी छोरी अदिमाको सम्झना भयो । मलाई घरमा हुँदा ऊ कानमा इयरफोन भिरेर अंग्रेजी गीत गुन्गुनाउँदै डेरामा यता र उता गर्थी । बडो बिस्तारो ! भरसक मैले नसुनुँ भनेजस्तो गरेर । म घरमा नहुँदा भने उसको फूल भोल्यूम चालु हुन्थ्यो । कहिले कहिले ऊ ढोका खोल्न हतारिएर आउँथी र गीत बन्द गर्न बिर्सन्थी । अनि जसै ढोका खोली कि दौड्दै गीत बन्द गर्न पुग्थी ।
पहिला त च्यानल बन्द गरौं कि जस्तो लाग्यो तर छोरीलाई सम्झिएरै मैले भोल्यूम बढाएँ । विचित्रको अनुभव भयो । यसरी एक्लै बस्ता मैले उसलाई, उसका चाहलाई कहिल्यै सम्झिएको थिइनँ । आजभोलि भाइबरमा कुरा हुँदा ऊ सन्चो बिसन्चो सोध्छे । बाँकी खासै बोल्दिनँ । नाति छ चार वर्षको । ऊ के के सुनाउँछ । ज्वाइँसँग कुरा हुन्छ । अदिमा खुल्दिनँ । म नै पनि कहाँ खुल्छु र ! कतिचोटि अदिमाका आँखा तल कालो भएको हुन्छ । कति घन्टा काम गर्छे कुन्नि !
‘ए नानी सुत्दिनस् कि क्या हो ?’ खै सोधेको मैले ! उफ्, यस्ता कुराको बारेमा मैले यही आइमाई मान्छे भेटेपछि सोच्न थालें । झ्याप्प टिभी बन्द गरें र झ्याल बाहिर ध्यान लगें । ठ्याक्कै अगाडिको कटेजबाट अनिलजी मेरै कटेजतिर आउँदै रहेछन् । हतार–हतार मैले सर्ट लगाएँ । उनले साँझमा बाहिर जाउँला है भनेका थिए । उनले भनेका बेला त मलाई पटक्कै निस्कन मन थिएन तर यतिखेर मलाई कतै नगई भएको थिएन । आफ्नै सोचको भारले मेरो छाती यामानको ढुंगा राखेजस्तो भएको थियो ।
अनिलजीसँग हिंड्न अरू त अप्ठेरो केही थिएन तर उनी अलिअलि पिउँछन् । मलाई न पिउनमा रुचि छ न पिलाउनमा । पिउन थालेपछि बहकिएर के के कुरा गर्न थाल्छन् । सारै बोझिल हुन थाल्छन् । यस्तै कन्फ्रेन्समा तीन–चार चोटि फेला परेको छु म उनको । अघि नै त भोलिको कन्फ्रेन्सको तयारी एकपटक रिभिजन गर्नुछ भनेर टार्ने सोचेको थिएँ तर अहिले जे होला होला भनेर हिंडें ।
हामीभन्दा अघि नै मान्छेको मेला लागिसकेको थियो । सररर आँखा घुमाउँदा हर कोही सेल्फी लिनमा व्यस्त थियो । आँखा तिरमिराएर मैले धेरैबेर हेर्न पनि सकिनँ । खोला किनार छेवैमा बस्ने ठाउँ नपाएकोमा अनिलजीले मुख बिगारे ।
‘अलि राम्रो ठाउँमा टेबल देऊ’, अनिलजीले वेटरलाई दिक्क हुँदै भने ।
उसले रेस्टुराँको आङ्नामै टेबल दियो । रेस्टुराँ एउटा ढिस्कामा उभिएको थियो जहाँबाट तलका सबै टेबलहरू र खोला देखिन्थ्यो । मलाई त ठीकै लाग्यो, अनिलजी भने सारै खुशी भएनन् । हामी दुवै तलतिर ज्यान पारेर रेस्टुरेन्टलाई ढाड देखाएर बस्यौं । बस्ने बित्तिकै अनिलजीले द्रुत गतिमा पाँच सातवटा सेल्फी लिइहाले । मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनै पाइनँ । तस्वीर लिंदा मेरो ज्यान अख्रक्क हुन्छ । मैले सम्झन खोजें, मेरो कुनै तस्वीरमा म खुलेर हाँसेको छैन । डेराको भित्तामा झुण्डिएको तस्वीर खिच्दा मलाई ठूली छोरी रिदिमाले हाँस्न सारै कर गरी । अनेक कुरा सम्झाएर हँसाउन पनि खोजी । म हाँस्नै सकिनँ । उल्टै उसले मेरो हप्काइ भेटी । त्यो तस्वीरमा म रिसाएको र ऊ डराएको प्रष्ट देखिन्छ । म हाँसेको भए के हुन्थ्यो ! आज मन चसक्क भो, आज मन चस्केर के गर्नु ! फेरि खिचाउँ भन्दा, मनु खै ?
‘सर पनि आज एक ग्लास लिनुस्’, अनिलजीले कर गरे, ‘आखिर मरिलानु के छ र ?’
उनले यो भन्नुको कारण वेटरले कतिवटा गिलास भनेर सोधेकाले पनि थियो ।
‘बेकारको कुरा नगर्नु न !’ मैले खिंजखिंजिएँ, ‘तपाईं पिउनुस् । मलाई जुस मगाउँछु । त्यो पनि गिलासमै आउँछ ।’
‘हेहेहे...’ अनिलजी लबस्तरो हाँसो हासें, ‘सरलाई कहिल्यै सकिन्न !’
अनि वेटर बियरको बोतल, एउटा खाली गिलास र एउटा सुन्तलाको जुस लिएर आयो । दुई प्लेट चिकेन मःमलाई भने अलि समय लाग्छ भनेर गयो । भर्खरै खिचेको फोटो अनिलजीले विलम्ब नगरी फेसबूकमा अपलोड गरे ।
‘तपाईंलाई पनि ट्याग गरेको छु’, उनले भने । उनी एक्लैको सेल्फीमा मलाई किन ट्याग गरेको भनेर मैले भनिनँ । दिनदिनै यस्तै ट्यागहरूको फन्दामा म पर्दै आएको छु ।
‘रिटायर भएपछि के छ त सर योजना ?’ अनिलजीले सोध्दा म पानीमा परेको घामको सिन्दुरे लाली हेर्दै थिएँ ।
‘खै !’ म फिस्स हाँसें ।
‘कान्छी छोरी अमेरिका छिन् हैन ?’ उनले थाहा पाएकै कुरा सोधेजस्तो गरे र मैले हो वा होइन भन्नै नपाई आफैं बोले, ‘जानुस् अमेरिका घुम्नुस् । बस्न मन लागे छोरीसँगै बस्नुस् । नभए यता जेठी छोरीसँग बसे पनि भयो । दुईदुईवटी छोरी छन्, मोज छ नि तपाईंलाई त !’
म अनिलजीलाई हेरेको हे¥यै भएँ । आज दिउँसो मात्र उसले भनी, छोरी हुनु जिन्दगीमा चहक हुनु हो । अनि अहिले अनिलजीले भने छोरीहरू भएकाले मैले बुढेसकालको चिन्ता गर्नुपर्दैन । मनमा अचम्मको उज्यालो जस्तो भएर आयो । मेरो हेराइसँगै मनमा झुलुक्क झुल्केको घाम अनिलजीले देखेनन् । उनी दुवै हातले मोबाइल समातेर करीब करीब अस्ताइसकेको घामको फोटो खिच्न थाले । त्यही मौकामा मैले फेरि एकपटक चारैतिर हेरें । अनि देख्ने बित्तिकै चिनें, तिल चामल कपाल फिजाएर बसेकी उसलाई । ऊ यहाँ छिट्टै आएकी रहिछ । खोला किनारमै ठाउँ पाएकी थिई । एक्लै थिई । यत्रो घुइँचोमा समेत एउटा कुर्सीमा बसेर अर्को कुर्सीमा खुट्टा पसारेकी थिई । एकचित्त भएर अस्ताउँदो घाम हेरिरहेकी उसमा पुगेर मेरो आँखा अन्त सर्नै चाहेन । तर एकैछिनमा मेरो आँखा तिरमिरायो जब एउटा वेटरले बियरको बोतल र गिलास उसको टेबलमा राख्यो । अनि उसले आफ्नो दाहिने मोहडा हामीतिर फर्काई र वेटरतिर हेरेर मुस्काई । मेरो मनमा उदाएको घाम झ्याप्प निभेजस्तो भो । यत्रा मान्छेहरूका बीचमा बियर पिएकी उसलाई लिएर भुरुरु गालीहरू मनमा आए ।
‘गतिछाडा आइमाइ !’ यति चाहिं मनबाट फुत्किएर ओठैमा आयो ।
‘के भन्नुभयो सर ?’ अनिलजी फोटोमै व्यस्त भएकाले सोधे ।
‘केही हैन ।’ मैले उनलाई फोटोमै व्यस्त राख्न शौचालय जाने इशारा गरें र गएँ ।
म उसलाई हेर्दिन भनेर शौचालयमै आफूलाई दृढ पारें । यस्तो दृढ पार्नुपर्ने जरूरी मलाई किन परेको थियो, त्यो मैले आफूलाई सोधिनँ । तर, जसै बाहिर निस्कें उसैलाई हेर्दै टेबलसम्म आएँ । ऊ आफ्नै धुनमा मग्न थिई । उसले गिलासको एक तिहाइ मात्र बियर पिएकी रहिछ । अनिलजीकै गफमा चासो दिन खोजे पनि घरीघरी मेरो आँखा उसकै बियरको गिलासमा गएर ठोक्किन्थ्यो । हाम्रो मःम आएर खाइसकेका थियौं । उसको भने केही खानेकुरा आएको थिएन । उसलाई चाहिएजस्तो पनि थिएन । सटासट बियर पिइरहेकी थिई ।
अनिलजीलाई मैले नै हतारो लगाएको थिएँ किनकि ऊ एक बोतल सकाएर उठेकी थिई । मतिर नजर जाला कि भनेर मैले आफ्नो मोबाइल तल खसाएँ । मोबाइल उठाउन तल निहुरिएँ । एक त कुर्सी उति अग्लो थिएन उसमाथि म आत्तिएर यति निहुरिएछु कि मेरो नाकको टुप्पामा बालुवा लाग्यो । म कस्तो स्वाँठ भएको ! उसले मलाई देखेर के हुन्थ्यो ? बोलाउँथी ? पक्कै बोलाउँथी ! उसलाई त के थियो र ? अनि दिउँसो मैले गाडीमा उसैको ज्यानमा गरेको वान्ताको कुरा गर्दिई भने ? अनिलजीका अघिल्तिर कति लाजमर्दो हुनेथियो । मैले टाउको उठाउँदा फेरि ऊ आफ्नै टेबलतिर जाँदै थिई । उसको पछिपछि अर्को बोतल बोकेर वेटर पनि जाँदै थियो । त्यसपछि म उठ्नै सकिनँ । अनिलजीले आधा ग्लासभन्दा बढी बियर स्वाट्ट पारिसकेका थिए ।
‘लौ त जाने भए जाउँ न त !’ उनले भने ।
‘हैन, बस्ने भए बसौं एकछिन् । रमाइलै भइरहेको छ ।’ मैले भनें ।
अनि अनिलजीले पनि अर्को बोतल बियर सकाए । टेबल टेबलमा क्यान्डल बलिसकेका थिए । ठाउँ–ठाउँमा ठड्याइएका पोलहरूमा पनि सेता बत्तीहरू बलिसकेका थिए । घरीघरी मेरो नजर कता पुगिरहेको छ अनिलजीले मेसो पाएछन् ।
‘चिनेको मान्छे हुन् सर ?’ उनले अलि धकाउँदै सोधे ।
‘हैन । अचम्म लागेर हेरेको । आजकालका आइमाईमान्छे हेर्नुस् त ! लाज छैन, यो उमेरमा यसरी बाहिरै पनि पिउन थालिसके है !’ मैले निकै गम्भीर भएर भनें । ‘कस्तो रमाइलो हैन त सर ! मलाई पनि बूढीसँग खोलाको किनारमा यसैगरी बियर पिउन मन छ ।’ उनले मेरो काँधमा प्याट्ट हान्दै भने, ‘म त रिटायर भएपछि पूरै रमाइलो गर्ने हो ।’
अनिलजीले भनेपछि मैले झिलिक्क सोचें । मनु थिइनँ तर पनि मैले सम्झने त उसैलाई हो । अहँ मैले त मनुलाई देख्तै देखिनँ । खोलाको किनारमा बियर त परको कुरा हातमा हात समाएको समेत मैले सम्झन सकिनँ । मलाई अचानक दिगमिग लागेर आयो । अन्तिमचोटि हेर्दा उसको गिलासमा बियर बाँकी नै थियो । मैले त्यसपछि उतिर हेर्दै हेरिनँ ।
बिल मागेको निकैबेरसम्म वेटरले बिल नल्याएपछि हामी काउन्टरमै पुग्यौं । उसको बिलमा एउटा सेकुवा जोडिएर आएको रहेछ । त्यसैमा ऊ चर्किंदै थिई । काउन्टरको केटो अर्डर लिने वेटरलाई बोलाउँदै थियो । वेटर अर्डर पु¥याउन गएको, आएको थिएन ।
‘कतिबेर कुर्नु ?’ ऊ छट्पटिएकी थिई ।
‘म्याडम हाम्रो ट्वाइलेट सफै छ ।’ काउन्टरको केटाले भनेपछि उसको छट्पटाहटको कारण थाहा भयो ।
‘महिला र पुरुषलाई बेग्लाबेग्लै ट्वाइलेट बनाउनु पर्दैन ?’ ऊ रिसाई, ‘देखिसकें मैले कस्तो सफा छ !’
म उसले नदेखोस् भनेर अनिलजीको आड लिएर छेलिएको थिएँ । यत्तिकैमा उसको अर्डर लिएको वेटर आइपुग्यो । अनि उसको बिलको समस्या समाधान भयो । उसको समस्या समाधान त भयो तर मेरो बढ्यो किनकि हल्का लागेका अनिलजी यताउता हल्लिएर मेरो ढाल बनिरहन सकेनन् । उसले मलाई देखी र आँखा फट्याई । त्यसमा चमक देखिन्थ्यो तर मेरा आँखा खुम्चिए र त्यसमा उसका प्रति खासै गतिलो भाव देखिएन । त्यो देखेर उसको आँखाको चमक हरायो र आँखा पुरानै साइजमा फर्कियो ।
रेस्टुराँबाट छुटेको ६ महीनापछि उसको र मेरो भेट एउटा रेस्टुराँमै भयो । यातायातमा हुँदा सँगै काम गरेका प्रदिपजीसँग चिया पिउन म त्यो रेस्टुराँमा गएको थिएँ । चिया पिउने कुरा भए पनि प्रदिपजीले बाहिर परिरहेको पानीलाई बहाना बनाएर आफूलाई रम मगाए । ऊ भिज्दै आइपुगेकी थिई । आकाशे रङको कुर्ता र सुरुवालमाथि निलो विनचिटर थियो जसको बाउला र सबैतिरको फेरबाट पानी चुहिरहेको थियो । यताउता आँखा घुमाई र हाम्रो टेबलतिर हात हल्लाउँदै आई । म त जमेजस्तो भएँ । कत्ति न चिनेको जस्तो गरेर ऊ किन आउनुपरेको होला भनेर मलाई चिटचिट पसिना आयो । प्रदिपजीलाई के भन्ने होला भनेर म आत्तिएँ । तर, ऊ त प्रदिपजीलाई पो देखेर आएकी रहिछ भन्ने कुरा प्रदिपजी ऊ नजिक आउँदै गर्दा उठेबाट थाहा भयो । एकैछिनसम्म आत्तिएको म प्रदिपजीलाई देखेर ऊ आएकी थाहा पाउँदा खिस्स परें । किन खिस्सिएँ, खै !
‘ओहो ! प्रदिपजी । के छ खबर ?’ उसले विनचिटर खोलेर कुर्सीमा टाँग्दै भनी, ‘कतिपछि भेट भयो त !’
‘म्यामको कृपाले ठीकै छ ।’ प्रदिपजी बत्तिसा देखाएर नतमस्तक भए । अनि पो उसले बल्ल मलाई देखी । उसका आँखा खुम्चने र फैलने भयो । शायद चिनेजस्तो लाग्यो र फेरि अन्जान जस्तो पनि पो लाग्यो कि !
‘उहाँ बद्री सर । अनि उहाँ चाहिं सारिका म्याम !’ प्रदिपजीले परिचय गराए ।
मैले यसरी उसको नाम थाहा पाएको थिएँ ।
‘ओहो ! याद आयो । तपाईंसँग बसमा भेट भएको थियो ।’ उसले भनी र मलाई उति वास्ता गरिनँ । प्रदिपजीका बालबच्चाका बारेमा सोधी । उनीहरूको भेट उसले काम गर्ने आईएनजिओले दिएको तालिममा भएको रहेछ । पछि प्रदिपजीकी छोरीले उसकै सिफारिशमा एउटा एनजिओमा काम पनि पाएकी रहिछिन् । त्यसैले पो प्रदिपजी पूरै निहुरमुन्टी न भएका रहेछन् ।
कुरा गर्दागर्दै रम आयो । प्रदिपजीले उसलाई सारै नै कर गरे र आफूलाई आएको रम उसतिर सारे ।
‘लौ तपाईंले सारै कर गर्नुभयो । नभए उति पिउन त मन छैन । सन्चो पनि छैन केही समयदेखि !’ उसले भनी ।
मलाई कतिखेर भागौं जस्तो भएको थियो । ऊ भने मलाई सौराहामा देखेर पनि नदेखेजस्तो गर्ने भनेर जिस्काउन थाली । प्रदिपजी जेमा पनि लाज पचेको हिंहिंहिं गरिरहेका थिए । म खुम्चिएर बोल्न सकेको थिइनँ । यस्ती आइमाईसँग फेरि म के बोल्नु ! अलिकति कर के गरेका थिए, पिउन थालीहाली । कस्ती आइमाई मान्छे हो यो ! मेरो माथा तातेर आयो ।
‘लौ पानी थामियो प्रदिपजी । म जान्छु ।’ उसले बाहिर हेरेर भनी । अनि जुरुक्क उठी पनि हाली । हातमा विनचिटर बोकी र पर्सबाट हजारका दुईवटा नोट टेबलमा राखी ।
‘पर्दैन । के गर्नुभएको ?’ मैले यति चाहिं बोलें । प्रदिपजी भने उही लबस्तरो हँसाइ हाँसे र मेरो तिघ्रामा चिमोटेर मलाई धेरै नबोल्न नसिहत दिए ।
‘मैले पनि खाएको छु नि ! पानी परेर भित्र छिरेको थिएँ । तपाईंहरूसँग भेट भयो । खुशी लाग्यो ।’ अनि उसले हाँस्दै आँखा झिम्क्याई, ‘एक डोज रम पनि दबाइयो !’ फटाफट निस्की पनि हाली ।
‘के गर्नुभएको सरले ?’ प्रदिपजीले ऊ गएपछि भने, ‘डिभोर्सी हो । टन्नै कमाउँछे । उसको त यस्तो पिउने पिलाउने चलिरहन्छ । लोग्ने नभएपछि जोसँग बसेर पिए पनि भयो । देख्नुभएन जाने बेलामा कसरी आँखा झिम्क्याएर गई !’
अघिसम्म म्यामका म्याम भनेर चाकरी गरिरहेका प्रदिपजी ऊ बाहिर पनि पुगेकी थिइनँ होला तँमा ओर्लिएर कुरा गर्न थाले । आफूले खाएको मात्र होइन, प्रदिपजी समेतले खाएको पुग्ने पैसा छाडेर गएकी थिई । उसैको पैसामा खाएर उसैलाई तथानाम भन्न थाले प्रदिपजी । धेरैबेरसम्म सुन्न सकिनँ अनि चियाको चालीस रुपैयाँ राखेर म निस्किएँ । भर्खरको पानीले भिजेको सडकमा निस्कँदा मलाई अनिलजीले भनेको सम्झना भयो, ‘हेर्नुस् त सर, कसैको परवाह नगरी त्यो उमेरमा जिन्दगी जिउन सक्नु कति मजा हुँदो हो !’
ऊ त्यस्तै थिई शायद, कसैको वास्ता नगरी जिन्दगी जिउन चाहने ! तर, ऊ बाहेक सबैलाई उसको जिन्दगीको वास्ता थियो ! मलाई प्रदिपजीलाई सम्झेर घिन लाग्यो र उसलाई सम्झेर आनन्द !
रिटायर हुँदासम्म म अनामनगरबाट मैतीदेवीमा डेरा सरिसकेको थिएँ । मलाई के थाहा म उसको नजिकतिर सरिरहेको थिएँ । ऊ शायद त्यतै छेउछाउ बस्थी । तरकारी किन्दा भेट भइरहन्थी । कहिले बिहान हिंड्दा गुह्येश्वरीको भ¥याङ्गमा बसिरहेकी भेट हुन्थी ।
‘बद्रीजी यता सुन्नुस् त !’ म खुरुखुरु उसलाई नदेखेजस्तो गरेर भ¥याङ्गबाट झर्दाझर्दै ऊ बोलाउँथी ।
बोलाइ नै सकेपछि नहेरेर हुन्थ्यो । उसका कपाल कहिल्यै सपक्क पारेर कोरेको हुँदैनथ्यो । कहिले केले कहिले केले लुज बाँधेकी हुन्थी । त्यो दिन सागको मुठो बाँध्ने परालले बाँधेकी थिई । कति ल्याङफ्याङे थी सारिका ! म भने बिहानै टाउकामा थोरै भए पनि बाँकी रहेका कपालमा तेल लगाइवरी सम्याएर हिंडेको थिएँ ।
‘यहाँ बस्नुस् !’ उसले आफ्नो छेउ देखाउँदै भनी, ‘एउटा कुरा सोध्नु छ ।’
‘भन्नुस् !’ मैले उभिईउभिई सोधें । छेउमा गएर थपक्क बस्न कहाँ सक्थें र !
‘तपाई ऊ त्यहाँ दाना खाइरहेको परेवा बन्न चाहनुहुन्छ कि बाटाका मान्छेबाट झोला थुतिरहेको बाँदर ?’ उसले निधार माथि उचालेर सोधी ।
के भन्छे हौ यो आइमाई मान्छे ! ऊ मलाई आफ्ना विचित्रका प्रश्नले चकित पार्थी । ६० वर्षको उमेरमा म परेवा र बाँदर हेरेर के बन्ने भन्ने कसरी सोचूँ !
जवानीमा मैले कहिल्यै स्वतन्त्र पक्षी बनेर आकाशमा उड्ने कल्पना गरिनँ भने बुढेसकालमा मेरो मनमा कुनै उटपट्याङका कुरा आउँथेनन् ।
‘हैट’ भनेर मैले उसको प्रश्न टारेर हिंडें तर त्यसपछि सोचें, साँच्चै के बन्दो हुँ ?
म आफैंसँग मुस्काएँ । यसरी उसले मलाई एक्लै मुस्कुराउने बनाई ।
उसले जहाँ देखे पनि बोलाएकै हुन्थी । ऊसँग बोल्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । म ऊ जस्तो ताल न बेतालका कुरा जान्दिन थिएँ । ऊ जस्तो आँखा झिम्क्याएर कुरा गर्न सक्तिनथें । उसले जस्तो कसैको ढाडमा प्याट्ट हानेर खित्का पनि मेरो छुट्दैनथ्यो । तर ऊ नदेखियोस् भन्ने लाग्दैनथ्यो । तरकारी किन्दा मोलतोल गरिरहेकी उसलाई म परैबाट हेरिराख्थें । मैले लुकीलुकी जीवनमा हेरेकी महिला ऊ नै थिई । मनुलाई हेर्न त मलाई परिवार, समाज सबैले हल्लाखल्ला गरीगरी स्वीकृति दिएका थिए ।
एकदिन मैतिदेवी चोकमा डिल्लीबजारतिरबाट आउँदै गरेकी ऊसँग भेट भयो । ऊ मकै खाँदै आउँदैथी । मेरो छेउमा आइपुगेपछि अचानक के भयो उसले मेरो हातमा मकै थमाई र आफू सडक पार गरेर प्रहरीबिटतिर गई । त्यसपछि कता गई, मैले देख्दादेख्दै ऊ विलाए जस्तो भई । म झन्डै १० मिनेटजति हातमा मकै बोकेर उभिएँ । के तालकी मान्छे हो ! केही नभनी कहाँ हराई । एक मनले त मकै फुत्त फ्यालेर हिंडू भयो तर आएर मागी भने के गर्नु भनेर हातमा मकै बोकीबोकी मैले तरकारी किनें । म पारि गएर पनि एकछिन उभिएँ । ऊ आइनँ अनि म बाटो लागें । बाटो लाग्दै गर्दा मैले मकै छोडाउँदै खान थालेछु । आफैंलाई मुखमा मकैका दाना चपाइराख्दा पनि विश्वास भएको थिएन कि मैले उसले खाएर आधा बाँकी रहेको मकै खाइरहेको थिएँ ।
एकदिन बिहान चिया कपमा खन्याउँदै थिएँ । फोन बज्यो । हतार गर्ने भएको कप हातबाट खस्यो । हातमा परेको तातो चियाले आत्तिएर यताउता उफ्रँदा कपको टुक्रामा देब्रे पाइताला परेछ । काटी त गयो । ह्वालह्वाल रगत आउन थाल्यो । निकैबेरसम्म पनि रगत नमाथिएपछि म चोकको मेडिकलमा ब्यान्डेज गर्न भनेर निस्किएँ । खुट्टा खोच्याउँदै हिंडेको बेला पछाडिबाट बजेको हर्नले वाक्क भएर हेरेको ऊ स्कुटर रोकेर हेलमेट खोल्दै थिई ।
‘के भयो ?’ उसले मेरो खुट्टा हेर्दै भनी ।
‘केही होइन । अलिकति घाउ भयो ।’ मैले सामान्य जस्तो गरेर हिंड्न खोजें ।
‘कस्तो मान्छे ! बस्नुस् स्कुटरमा । कहाँ जाने ? म छोडिदिन्छु ।’ उसले सीधै स्कुटर मेरो सामुन्ने ल्याई ।
म सकपकाएको देखेर ऊ कराई, ‘बस्नुस् खुरुक्क !’
जेठी छोरी रिदिमाको बाहेक कुनै महिलाको स्कुटरमा बसेको थिइनँ । उसले ‘खुरुक्क’ भनेर आदेश दिए पनि मेरो ज्यान कहाँ चलमलिन्थ्यो र ! म अररो भएर उभिएँ र चारैतिर यसरी हेरें मानौं म एकदम प्रख्यात मान्छे हुँ । सबले मलाई चिन्छन् । म किन यो महिलाको स्कुटरमा बसें ? यो महिला मेरो को हो ? म कहाँ जान बसें ? म टाँस्सिएर पो बसें कि ? सबैले आँखा गाडेर हेरिरहेका छन् । सबलाई मेरो जीवनमा चासो छ । तर, कसैले मतिर हेरिरहेको थिएन । कसैलाई वास्तै थिएन । अझ म बस्न ढिलो गरेकाले पछाडिबाट आइरहेको गाडीलाई अप्ठेरो भएको थियो । हर्न बजाइरहेको थियो । गाडीले मान्छे हिंड्ने बाटो छेकेको थियो । काखमा नानी बोकेकी महिला हामी छिटो गए हुन्थ्यो जस्तो गरेर रिसाएकी थिई ।
मैले दुवै हातले स्कुटरको पछाडि समाएँ । उसले बिस्तारो हाँकी र मलाई मेडिकलमा लगेर उतारी । मैले ‘पर्दैन’ भन्दा भन्दै ऊ सँगसँगै आई । घाउ सफा गरेर ब्यान्डेज बाँधेपछि एउटा टिटनासको सुइ पनि लगाउनुपर्ने भयो । सुइ भनेपछि मलाई डाँको छोडेर रुन मन लाग्यो । डरले मुटु थरर काँप्यो । ऊ भने फोनमा कुरा गर्दै थिई । गर्दागर्दै अलि पर पुगी । मैले उसलाई पुलुक्क हेरें । ऊ मुस्कुराई । मेरो मनको डर बुझिनँ ।
‘पख भाइ उहाँको कुरा सकाउन देऊ अनि हानौला सुई’, मैले सुई तेस्र्याइसकेको केटोलाई रोकें ।
‘हानियो त सुइ’, ऊ कुरा सकेर आई ।
‘कहाँ हान्नु ! उहाँलाई डर लाग्छ जस्तो छ । ल, तपाईं पनि छेवैमा बस्नुस् ।’ केटोले हाँस्तै भन्यो ।
मोरो ! सबै भनिहाल्यो । ऊ छेवैमा बसी । केटोले मेरो भेस्टको बाहुला माथि तान्यो । चिसो कपाल पाखुरामा दल्यो । उसले मतिर हेरी र मेरो हात समाई । उसको न्यानो हात कस्तो मल्हम जस्तो महसूस भएको ! कतिखेर केटोले सुइ घोच्यो मैले पत्तोधरी पाइनँ । यस्तो भरोसा मैले कसैबाट पाइनँ । पाइनँ नभनूँ, मैले लिनै खोजिनँ । परिवारमा मैले आफूलाई फलामको मान्छे हुँ जस्तो प्रस्तुत गरेको थिएँ । अहिले सुइ हान्नु नपरेको भएँ यहाँ पनि म कहाँ गल्थें र ! तर आफ्ना मान्छे चाहिने भनेकै गलेको बेला रहेछ । तर के ऊ मेरी आफ्नी मान्छे थिई त ! अहँ, थिइनँ । तर अब पराइ पनि थिइनँ ।
बिस्तारै ऊ र म चिया पिउन भेट्न थाल्यौं । मीठो चिया पिउने उसको र मेरो ठाउँ फरक फरक थिए । कहिले उसले भनेको ठाउँमा त कहिले मैले भनेको ठाउँमा उसको स्कुटरपछि बसेर जान थालें । अब म निर्धक्क भएर उसको काँधमा आफ्नो हात राखेर स्कुटरमा बस्थें र कसैले हेरिरहेको छ कि भनेर वास्तै गर्दिनथें ।
तर, एकचोटि बाटामा रिदिमा भेटिएपछि मैले वास्ता गर्नुपर्ने मान्छेको लामो सूची देखें । हामी पुतलीसडकको ट्राफिक सिग्नलमा रोकिएका थियौं । रिदिमा पनि हाम्रै छेउमा रोकिन आइपुगी । आफ्नो बाउलाई उसले चिनिहाली । त्यतिखेर भने म के गरौं नगरौंको स्थितिमा पुगें । मैले हतार–हतार उसको काँधबाट हात हटाएँ । रिदिमाले अनुहारमा कुनै अचम्मको भाव ल्याइन् ।
‘बुबा मैले पठाएको फोटो हेर्नुभयो ?’ उसले हिजो भाइबरमा पठाएका फोटाका कुरा गरी । उनीहरू नयाँ घर किन्दै थिए । तिनै घरका फोटा उसले पठाएकी थिई । यति सहज तरिकाले सोधी कि उसको सहजता मलाई स्वाभाविक लागेन । सारिकाले मुन्टो फर्काएर रिदिमातिर हेरी । रिदिमा मुस्काइ भनेपछि सारिकाले मुस्कुराएर हेरी होली । मैले सारिकातिर हेर्नै सकेकी थिइनँ ।
‘हेरें । राम्रो छ ।’ मैले बल गरेर यी तीन शब्द मुखबाट निकालें । नजर भने जुधाउन सकिनँ ।
‘ल, ल सिग्नल खुल्यो । भरे फोन गर्छु है ।’ रिदिमा हामीभन्दा अघि हुँइकिई ।
योभन्दा अघि मैले चिनेका कोही पनि मान्छे भेटिएका थिएनन् । त्यो दिन पो म झसंग भएँ । ओहो, नचिनेका मान्छेले केही नसोचे पनि चिनेकाले के भन्लान् ! म कसरी यस्तो बेहोसी हुन सक्थें । सारिकालाई पो केही कुराको मतलब छैन । ऊ डिभोर्स गरेकी महिला जोसँग पनि हिंड्छे भन्ने होला, म त सज्जनमा दरिएको छु । ट्राफिक सिग्नल पार गर्ने बित्तिकै मैले स्कुटर रोक्न भनें र केही नभनी ओर्लेर सरासर डेरातिर हिंडें । डेरा पुग्ने बित्तिकै अदिमाको फोन आयो । रिदिमाले सुनाइसकिछ भनेर फोन उठाउन सकिनँ । ऊ भने तारन्तार फोन गरिरहेकी थिई । के भन्नुँ म उसलाई ? आफ्नो बाउ यो उमेरमा एउटी महिलासँग बरालिएर हिंड्छ भन्ने सुन्दा उसलाई के भयो होला ? उसले ज्वाइँ र परिवारका अन्यलाई के भन्नूँ ? रिदिमाको त अझ सासू र ससुरा पनि सँगै छन् ।
मेरो आँखाबाट बरबर आँशु झर्न थाल्यो । म खाटको अडेस लागेर भुइँमा थुचुक्क बसें । छाती पिटीपिटी रुन थालें । यो सब यही मनले गर्दा हो भनेर मलाई मर्नु भयो । रिदिमाले सोची होली, ‘मसँग बस्नु भन्दा नमानेको त यही गर्न रहेछ ।’ उसले मलाई कति कर गरेकी थिई, ऊसँगै बस्न भनेर । ज्वाइँ पनि आएका थिए । तर, मैले मान्दै मानेको थिइनँ । रिटायर भएपछि अदिमाले पनि ‘आउनु कि आउनु’ भनेर जिद्दी गरेकी थिई तर मैले पछि ‘घुम्न आउँला’ भनेर टारेको थिएँ । छोरीहरूलाई मेरो कति चिन्ता थियो तर अब उनीहरूलाई कति रिस उठ्यो होला ? घिन माने होलान् ? थुक्क म !
अदिमाको फोन आउन बन्द भएको थियो । निकैबेरपछि म भुइँबाट उठें । एक गिलास पानी खाएँ । अनि सोचे छोरीहरूसँग म माफी माग्छु र चूपचाप अमेरिका जान्छु । केही समय बस्छु । अनि फर्केर रिदिमाको घर छेउमै डेरा सर्छु । त्यति भए उसले बिहान बेलुका मलाई पनि हेर्न भ्याउँछे ।
फोन खोल्दा अदिमाको एउटा भिडियो मेसेज आएको रहेछ – बुबा रिदिमाले...
उः रिदिमाले आखिर सुनाइसकेकी रहिछ । अब त्यसपछि के थियो सुनेर पो के गर्नु भन्ने लाग्यो । तर फेरि उसको गुनासो के के रैछ भन्ने थाहा पाउन पनि सुन्नु त प¥यो भनेर प्ले बटन थिचें ।
‘बुबा रिदिमाले आज तपाईंलाई भेटेकी रहिछ...’
सास रोकिएला जस्तो भयो । पज बटन थिचेर लामो सास फेरें अनि फेरि प्ले बटन थिचें । साथ छँदा सधैं थर्काएर राखेकी छोरीको मेसेज सुन्न मलाई संसारभरको आँट चाहिएको थियो ।
‘...तपाईंले मैले पठाइदिएको पिंक टिसर्ट लगाउनुभएको रहेछ । मलाई कस्तो खुशी लाग्यो । मैले पठाइदिएको कहिले केही लाउनु हुन्न खाली फिका कलर लगाउनुहुन्छ भनेर मलाई कति दिक्क लाग्थ्यो । आज म धेरै खुशी छु । थ्याङ्क्यू बुबा !’
उसको मेसेज यति थियो । भिडियोमा पठाएकी भए पनि मैले हेर्ने आँट नगरेर मोबाइल घोप्ट्याएर आवाज मात्र सुनेको थिएँ । मेसेज सकिने बित्तिकै त म उफ्री हालें नि ! भिडियो हेर्ने आँट मात्र आएन मैले उसलाई जवाफ समेत पठाएँ । भिडियोमा उसको आँखाको चमक देखेर म अघिसम्म लाज, घिनले रोएको मान्छे खुशीले रुन थालें । अघि पिटेको छाती मुसारें । त्यही गुलाबी भेस्टले मेरो मन छोपेको थियो । त्यसरी छाती मुसारिरहँदा सारिकाको याद आयो, मानौं ऊ त्यहाँभित्र छे ! बीच बाटोमा झर्किएर हिंडेको थिएँ । उसले के सोची होली ?
सारिका रिसाएकी थिइनँ ।
‘छोरीले देख्ता अप्ठेरो लाग्यो होला भन्ने मैले बुझें ।’ उसले साँझ चिया पिउँदै सहजै भनी । हैन हौ यी तीन महिलाले कुराहरू कति सहजै लिन सकेका ! म भने जीवनभर नचाहिने कुराले किन जकडिन पुगें ? त्यसपछि रिदिमासँग कुरा भयो । मेरो साथी भनेर मैले सारिकासँग चिनाएँ । कति हार्दिकताका साथ दुवैले एकअर्कासँग भेटे । अदिमाले समेत उसलाई भिडियो कल गरिसकिछ । जिन्दगीलाई यिनीहरूले यति सहजताका साथ लिइरहँदा म भने कहाँ थिएँ ? कहाँ छुटें म ? उफ् !
छोरीहरू यति सहज भैसकेपछि अरू चिनेका मान्छेले के भन्लान् भनेर मैले सोचिनँ । गफगाफ चली नै रहेको थियो तर एकदिन अचानक उसले भनेको कुराले हाम्रो भेट र गफको सिलसिलामा रोक लगायो ।
‘मलाई तपाईं मनपर्छ । हामी दुवै एक्लै छौं । साथै बसौं ।’ वसन्तपुरको डबलीमा चिया पिउँदै उसले मेरो आँखैमा हेरेर भनी । हाम्रो पहिलो भेटको तीन वर्षपछि उसले यो कुरा भनेकी थिई ।
‘म तपाईंलाई मन पराउँदिनँ । हाम्रो केही मिल्दैन । यसो गफगाफसम्म ठीकै छ भनेर मात्र ! मेरो मनमा केही छैन ।’ मैले हड्बडाएर भनें ।
उसले त्यस्तो प्रस्ताव राख्ली भनेर मैले एकमनमा पनि सोचेको थिइनँ । साथै बस्ने चाहको बारेमा मैले मेरो मनलाई ‘उत्ताउलो’ हुनबाट रोकेको थिएँ । मैले केही नभनुन्जेलसम्म उसले प्रस्ताव राख्ली भनेर मैले सोच्तै सोचिनँ । जे कुरा पनि खुलेर गर्ने ऊ यतिसम्म खुल्ली भनेर मेरो मनमा आएन । त्यो दिनको चिया गफ बोझिल भयो । उसले मेरो इन्कारलाई सहजै लिइनँ । त्यो उसको आँखामा उदाएको उदासीले प्रष्टै हुन्थ्यो । उसको प्रस्तावमा तत्काल मैले बोल्न सकेकोमा मलाई सन्तोष नै थियो । तर, त्यो सन्तोष एकैछिनको हो भन्ने मैले भोलिपल्टै थाहा पाएँ ।
मेरो दैनिकीमा ऊ जोडिएकी थिई । बिहान मर्निङ्गवाकमा उसलाई नदेखेपछि फोन गरें ।
‘ए ! आज म त्यता गइनँ ।’ उसले शान्त स्वरमा भनी ।
‘हिजोको कुराले तपाईं मसँग रिसाउनुभयो ?’ मैले सोधें किनकि उसको शान्त स्वर मलाई स्वाभाविक लागेन । म उसको बकबक मन पराउन थालिसकेको थिएँ ।
‘रिसाएको होइन तर नराम्रो लाग्यो । मलाई केही समय चाहिन्छ है ।’ उसले आफ्नो मनको कुरा नलुकाई भनी । म हुन्थें भने होइन केही छैन । किन रिसाउनु भन्थें होला । होला हैन, भन्थें । कम्तीमा म आफ्नोबारे ठोकुवा गर्न सक्छु ।
त्यसपछिको एकसाता मैले आफूसँग भएको सम्पत्तिको हिसाब किताब निकालें । संचयकोषमा अन्तिममा आठ लाख रुपियाँ थियो । तीनलाख आफूलाई राखेर दुवै छोरीलाई अढाइ–अढाइ लाख दिइसकेको थिएँ । उनीहरूले लिन मानेका थिएनन् तर मैले उनीहरूलाई जिन्दगीमा दिनै पो के सकेको थिएँ र ! बाआमा हेर्ने जिम्मा भाइले लिएकाले गाउँको सम्पत्ति उसैलाई दिएको थिएँ । कहिल्यै एक रुपियाँ यताउता नगरेको मैले काठमाडौंमा केही जोडेको थिइनँ । प्रथम श्रेणीको अधिकृत भएर रिटायर भएको थिएँ । पेन्सनको करीब करीब २२ हजार रुपियाँ आउँथ्यो । दुईवटा कोठा र एउटा किचन भएको डेराको भाडा नै १५ हजार थियो । छोरीहरू आउँदा सुत्न एउटा अलग्गै कोठा चाहिन्थ्यो नै ! बाँकी सात हजारले खान पुगेको थियो । ठूलै बिरामी भए भने के गर्दो हुँ भनेर सोच्दा मात्रै पनि ज्वरो आउँछ भनेर म डराउँथें । यस्तो बेलामा म उसँग कसरी साथै बस्न सक्थें । मैले उसलाई कसरी साथ राख्न सक्थें । म डराएको थिएँ तर भन्न सकिनँ । डर देखाउन मैले जानेकै थिइनँ ।
दश दिनसम्म उसको चालचुल भएन । अनि आफैंले फोन गरें । फोन स्विच अफ थियो । म उसको घरमा पनि पुगें । गेटमै ताल्चा लागेको थियो । चार–पाँच दिनसम्म म उसको घर पुगें । गेट बन्दै थियो, फोन अझै अफ थियो । ऊ यति उदास भई कि मलाई भन्दै नभनी कहाँ गई ? उसका त कोही आफन्त थिएनन् । नभएका नै होइनन्, उसलाई कसैको र उसको कसैलाई वास्ता थिएन ।
मैले कम्तीमा उसलाई आफ्नो डर त भन्नुपथ्र्यो । त्यति भन्न पाएको भए उसले कुरा बुझ्थी होली । मसँग मन दुखाउन्न थिई होली । कहाँ खोज्नु म उसलाई ? ऊ हराउली र मैले खोज्नुपर्ला भन्ने जानेको भए म उसँग ऊ जाने हरेक ठाउँको ठेगाना सोधेर राख्थें । मलाई आफैंलाई धिक्कार्ने बनाएर ऊ कहाँ गई ? मैले भित्ताहरूलाई सोधें । मैले कुर्सीहरूलाई सोधें । मैले ढोकाहरूलाई पनि सोधें । त्यो बाहेक अरूलाई सोध्न सक्दिनथें । रिदिमाले एकचोटि ‘आन्टी कस्तो मज्जाको मान्छे है । बिहे गर्नु बुबा !’ भन्दा म रिसाएको थिएँ, ‘साथी हुन् । जथाभावी नसोच ।’ आफैंले चूप लगाएकाले छोरीसँग पनि मैले मनको वह पोख्न सकिनँ ।
दुई महीनापछि उसको फोन लाग्यो । ऊ घरैमा रहिछ । म दौड्दै पुगें । गेट खुल्लै थियो । मूल ढोकामा घन्टी बजाएपछि ढोका खोली । मैले ढोकैमा उभिई उभिई भररर आफ्ना सबै कुरा भनें, ‘मलाई साथै बस्न मन छ । म पनि मन पराउँछु । मलाई तिम्रो स्कुटरमा चढेर यो शहरका सबै गल्ली गल्ली घुम्न मन छ । तिम्रो बकबक धेरै भयो भने म आफ्नो बेसुरा स्वरमा गीत सुनाएर झर्को लगाइदिन्छु । म तिमीलाई सागको मुठाका सबै पराल धोएर दिन्छु ताकि तिम्रो कपाल नगन्हाओस् । अहिले छेउमा हुँदा गन्हाउँछ ।’
उसले मलाई रोकिनँ । भित्र बोलाइनँ । हात बाँधेर मेरो कुरा सुनिराखी ।
‘तर मसँग यो उमेरमा अर्को मान्छेलाई पाल्ने ताकत छैन । बचत थोरै छ । अलि फराकिलो डेरा लिन पैसा पुग्दैन । छोरीहरूसँग म हामीलाई पनि पाल भन्न सक्तिन । बुढेसकालमा ठूलै केही भएर अस्पतालमा खर्च गर्नुप¥यो भने म सक्दिनँ । भाग्छु होला ।’ मैले बोल्दा मेरा आँखाबाट बररर आँशु झरे । नाकबाट झरेको पातलो पानीले जुँगा भिजायो ।
यति भनिसकेपछि ‘भैगयो नि त’ भनेर भित्र बोलाउली भन्ने आशा थियो ।
‘सकियो ?’ उसले सोधी ।
‘साथै बस्ने भनेको तिमीले मलाई पाल भनेको हुँ मैले ? यो मेरो आफ्नै घर हो । मेरो ब्याङ्कमा पनि टन्नै पैसा छ । जीवनभर काम गरेकी छु, आफूलाई र तिमीलाई पनि पाल्न सक्छु । तिमीले सोध्यौ ? मैले पाल्दा तिमीलाई समस्या हुन्छ भने त कुरै सकियो । म त यो घर छाडेर कतै जान्नँ । तिमी आफ्नो डेरा छोड्न सक्दैनौ भने भैगयो ।’ उसले कडासँग आफ्नो कुरा भनी ।
‘म थाकेर आएको छु । सुत्छु । साथै बस्ने भनेको यो घरमा बस्ने भनेको कुरा तिमीले बुझ्छौ भने आउनु ! हैन भने भैगयो !’ उसले ढोका लगाई ।
‘यो भैगयो भन्या के हो ? अब हाम्रो कुरा हुँदैन कि के !’ मैले बाहिरबाट रुन्चे भएर सोधें । उताबाट आवाज आएन । म उसको जवाफ कुरेर पनि बसिनँ । छिटोछिटो डेरा फर्किएँ । झरी पर्न आकाशमा कालो बादल मडारिइरहेको थियो । फटाफट आफ्ना सबै सामान प्याक गर्न थालें । ओहो ! जिन्दगीमा मेरो ज्यान यति हलुका कहिल्यै भएको थिएन । ‘वेवकुफ !’ मैले आफ्नै माथामा हान्दै आफैलाई ‘तँ स्वाँठ !’ पनि भनें ।
घरपटी यस्तो हतारोका साथ म किन डेरा सर्दैछु भनेर चकित थिए । पानी पर्न थाली नै सकेकाले ‘सामान भोलितिर लिन आउँछु’ भनेर रिदिमाले किनेर दिएको बुट्टे छाता ओढेर र अदिमाले पठाएको चहकिलो रातो भेस्ट लगाएर म हिंडे । पछाडि भिरेको झोलामा छाताको पानी तैरिंदा केही थोपा झरिरहेको थियो ।
उसको मूल गेट अझै खुल्लै थियो । उसले आँखा मिच्तै ढोका खोली ।
‘म आएँ !’ यति भनेर म सरासर भित्र पसें ।